Nyowani Apple Chitoro muVienna, Austria, uno Kukadzi 24 | Ndinobva mac
Nyowani Apple Chitoro muVienna, Austria, uno Kukadzi 24
Musi waFebruary 24, sekutsvaga kwakaitwa nenyanzvi mumunda, Apple kuvhura Apple Store itsva muVienna, guta guru reAustria. Iyo nzvimbo ichave iri yepakati mugwagwa weKärntner Straße, iri munzvimbo yekutengesa yeguta, uko mumwedzi yapfuura, Apple yakagadzirisa nzvimbo uye kugadzirira chitoro chekuvhura.
Ichi chitoro chitsva, padhuze neStephansplatz, iri munzvimbo yemitsipa yenyika ine hunyanzvi yekuwedzera muEuropean yekambani yeCalifornia, ichava ne3 pasi uye inobata yakakosha kona yakagadzirirwa girazi mapaneru ayo anoipa iyo yemazuva ano uye yakachena chitarisiko.
La "Chitoro" ichatora dhizaini nyowani yakaiswa muzvitoro zvekupedzisira zvakavhurwa nemuchina, uye ichave neGenius Bar, pamwe nenzvimbo dzakaringana dzehurukuro uye makosi akasiyana siyana, zvese zvine chekuita nezvigadzirwa zveApple.
Runyerekupe nezvechitoro ichi chave kuchizviita kuti chinzwike kweinopfuura gore (muchokwadi gore rapfuura tinotaura pano, muNdiri kubva kuMac, nezve kuvhurika kweiyi) asi, pakupedzisira, Uchave unotevera Kukadzi 24 apo patinogona pakupedzisira kusvika pakuziva chitoro chitsva yevakomana veCupertino mumugwagwa wakabatikana wekutenga weKärntner Straße.
Kunyanya, iyo itsva Apple Chitoro mu Vienna ichatora iyo yaimbova saiti yechitoro chechiratidzo mweya, chivakwa chakakura chinonyatso kusangana nezvinotarisirwa naApple. Zvekare zvakare, Apple ichiisa chiratidzo chayo munzvimbo dzakakosha uye dzakakosha nzvimbo dzekutengesa.
Kuvhura kwekutanga uye kuvhurwa, izvo zvichanyatso kuve padanho rakaenzana nemamwe mavhure akaitwa, vangangove vatengi vanozokwanisa kukumbira kugadzwa naGenius uye kusaina nhasi kuNhasi Apple makirasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Nyowani Apple Chitoro muVienna, Austria, uno Kukadzi 24
9x19 podcast: Apple inorova mabhureki